Qarixii Suuqgeynta Tusmada | Martech Zone
Jimco, Febraayo 10, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Qaybaha suuq geynta iyo iibinta waxay waligood sameynayeen suuq geynta waxyaabaha ku saabsan… aad ayey ufududeyd inaad iibiso badeecadaada markii aad laheyd markhaatiyo macaamiil ah, waraaqo cadcad, daraasad kiis, emayl iyo dukumiintiyo kale si ay uga caawiyaan waxbarista iibsadaha. Hadda nuxurkaasi waa la raadin karo lana wadaagi karo adoo adeegsanaya shabakadda, in kastoo, ay ahayd inaan la nimaadno nooc magac ah for Content Suuq. Sababtoo ah iibsadayaasha ayaa awood loo siiyay inay helaan macluumaadka naftooda, suuq-geynta waxyaabaha ayaa fure u ah maxaa yeelay waxa aad u baahan tahay laga helo raadinta iyo shabakadaha kuwa raadinaya.
Ganacsiyada nooc kasta leh waxay bilaabayaan inay gartaan sida ay muhiimka ugu tahay istiraatiijiyad adag oo ku saabsan qorshooyinka suuqgeynta. Xitaa shirkadaha waaweyn sida Coca-Cola waxay wax walba ku sharadyaan istiraatiijiyad isku-dhafan oo isku dhafan. Waxaa soo mariyay qoraalka Bluegrass